Breziliana Filoha Bolsonaro te handrara ny lahy sy ny vavy foto-kevitra any an-tsekoly | Apg29
Sekoly tokony hiarovana ireo ankizy avy amin'ny lahy sy ny vavy foto-kevitra, manoratra ny Filohan'ny Brezila Jair Bolsonaro ao amin'ny Twitter.
Image: World androany.
Tsy sarotra ny hahatakatra ny antony ny filoha Breziliana Jair Bolsonaro, toy ny Etazonia ny filoha Donald Trump, tena malaza amin'ny Kristianina.
Sekoly tokony hiarovana ireo ankizy avy amin'ny lahy sy ny vavy foto-kevitra, ny filohan'i Brezila, Jair Bolsonaro, nanao hoe: nijery Twitter. Ny fitantanan-draharaha dia manolotra ny volavolan-dalàna momba izany.
"Mba hiarovana ny ankizy an-tsekoly, no nangatahako ny Minisitry ny Fampianarana mba hanomanana ny volavolan-dalàna mba handràra lahy sy ny vavy any amin'ny sekoly fanabeazana fototra foto-kevitra", hoy izy nanoratra tao amin'ny 3 Septambra.
afa-tsy ny fianakaviana
Ny hetsika dia mifanaraka ny tarehimarika Bolsonaro dia rehefa lasa filohan'ny Brezila ..
"Manana manam-paharoa afaka miandry antsika mba hanorina indray ny firenentsika ... izahay firenena iray, afa-tsy ny fianakaviana, fanajana ny fivavahana sy ny Jiosy-Kristianina fototra, ady lahy sy ny vavy ideolojia, miaro ny soatoavina," hoy izy, araka ny The Guardian.
Tsy sarotra ny hahatakatra ny antony ny filoha Breziliana Jair Bolsonaro, toy ny Etazonia ny filoha Donald Trump, tena malaza amin'ny Kristianina. Ary toy ny American mitovy, dia tsy tena malaza eo amin'ny LGBT faribolana sy ny sisa-liberaly.
Ny tsara indrindra World sekoly
Sekoly Alahady dia ny tsara indrindra ho an'ny sekoly ny ankizy! Aoka izy ireo handeha any amin'ny sekoly alahady mba hisambotra an'i Jesosy - na ny marimarina kokoa, fa Jesosy mahazo azy ireo - dia ho voaro sy mirindra tsara ny alalan 'ny fiainana.